दिल्लीमा रक्सी किन्दा यति धेरै कोरोना शुल्क तिर्नुपर्ने , अब सबैले खान्छन होला त ? – Sudarshan Khabar
दिल्लीमा रक्सी किन्दा यति धेरै कोरोना शुल्क तिर्नुपर्ने , अब सबैले खान्छन होला त ?
भारतमा सोमबारदेखि रक्सी पसलहरू खुल्न थालेका छन्। झन्डै ४० दिनपछि रक्सी पसल खुलेपछि किन्नेहरूको भीड लागेको थियो।
भीड यति ठूलो थियो कि भौतिक दूरी कायम नगरेको भन्दै प्रहरीले राजधानी नयाँदिल्लीका रक्सी पसलअगाडि जम्मा भएका माथि लाठीचार्ज गर्नु परेको थियो।
रक्सी किन्नेहरूको थामी नसक्नु भीड लागेपछि दिल्ली सरकारले मंगलबारदेखि रक्सी किन्दा खुद्रा मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कोरोना शुल्क तिर्नु पर्ने नयाँ नियम लागू गरेको छ।
कोरोना शुल्क लगाएपछि दिल्लीमा मदिरा सेवन निरूत्साहित हुने दिल्ली सरकारको आशा छ।
भारतमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न गत मार्च २५ देखि देशव्यापी लकडाउन गरिएको थियो। सोमबारदेखि त्यहाँ तेस्रो पटक थपिएको लकडाउन जारी छ।
लकडाउनका बाबजुद भारतमा कोरोना संक्रमित भने तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले यसवर्षको एसईई परीक्षा लिन सम्भव नदेखिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले गरेका आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मानेर प्रमाणपत्र दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
कोरानाभाइरसको त्रासका कारण गत चैत ६ गतेदेखि हुने तय भएको परीक्षा हालसम्म पनि हुन नसकेपछि व्याब्सनले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
‘परीक्षा लिन सम्भव नदेखिएको हुनाले २०७६ सालको परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीहरुका लागि मात्र लागू हुनेगरी विद्यालयहरुले गरेका आन्तरिक मूल्यांकनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड शिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ’ प्याब्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस कार्यका लागि कानुनी बाधा अड्चन हटाइ आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा प्रमाणपत्र दिन आवश्यक पहल गर्न पनि सरकारसँग ब्याब्सनले अनुरोध गरेको छ ।
प्याब्सनले विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा विद्यालय परीक्षा बोर्डहरुले आन्तरिक रुपमा लिएको परीक्षालाई नै आधार मानेर विद्यार्थीहरुलाई उत्तीर्ण गराइसकेको पनि जनाएको छ ।